Castle Builder II |
Rabcat zvino chakashama tichitarisa kuti rakazotevera avo nokusingaperi inonakidza Castle muvaki slots, aine slots zvakakodzera vanoda Castle Builder 2. mutambo uyu akati kuva ndiwedzere nohuya nowakautangira, uye ane, zvakatonyanya, zvinhu kuti uwedzere payout wako. Unogona kuverenga mberi uye kudzidza zvakawanda pamusoro slots ichi.
Kudzidza More About Building nhare munyika yakasununguka bhonasi machine slots
With Castle Builder 2 une 3 misara, 5 Gwenzi uye 15 wakasimba paylines. Iwe tora nhanho mbiri ichi vakasununguka bhonasi slots Machine. Wokutanga pamwero kunosanganisira iwe kusarudza pakati vanonyanya kutaurwa matatu. vatambi ava vakanga variwo vari epakutanga shanduro mutambo.
Pakutanga, iwe vanotarisirwa kusarudza mumwe maviri vatambi, kureva Sam uye Mandy. Kamwe wokutanga chechetere kwapera, wechitatu munhu kunoratidzwa. In wokutanga chechetere, nemiwo zvinoda kuti usarudze nzvimbo kutanga. A mepu zvichakurukurwa kwamuri kusarudza kupi kutanga kubva.
slots ichi ane zvimwe low-ukoshi zviratidzo kuti anosanganisira chidhinha, girenayiti, dombo uye ibwe. Mukuru-ukoshi mifananidzo zvinosanganisira mubhawa goridhe, korona uye pfuma bhokisi. Nokukurumidza panguva iyo munovaka nemisasa yenyu ichava novimba nhamba kuhwina combos kuti iwe nyika chienderane mifananidzo.
Wild uparadzire Symbols Iva rakakura
In Castle Builder 2 ari Wild chiratidzo chinomiririrwa kana Sam kana Mandy. Izvi zvichava novimba munhu wasarudza kubva pakutanga mutambo. Hazvinei zvikara kuvake iwe sarudza, zvichaita kutsiva mumwe zviratidzo zvose kuti uwedzere mikana yako kumhara kuhwina mubatanidzwa.
The chiratidzo chete pamusoro Gwenzi kuti remake harigoni kutsiva, ndiye paradzira kuvake. The Pararirai kuvake vanoratidzwa pano somunhu Pink Free kuruka kuvake. Unofanira kuziva kuti mune slots ichi yenyu Castle kuvaka anozviratidza kurutivi chidzitiro rworuboshwe. The Gwenzi, pane rimwe divi, runogonawo kuoneka kurudyi chidzitiro.
With ichi vakasununguka bhonasi machine slots, iwe vachazadza 8 grids kuti kunogona kuonekwawo pajinga kuruboshwe-ruoko pakona enyu nokutamba chinovhara. Izvi zvinoitwa kana iwe nenyika kuhwina combos. Sezvo grids vari makaguta, wako Castle kuvaka achava panguva azara. ne 8 grids akazara, kwenyu Castle kuvakwa kuti munhu ari ipapo wakakwana.
Uchabva kuendeswa yakasiyana nzvimbo, apo uchatanga chimwezve Castle kuvaka wako hunhu yasarudzwa. Kamwe ose zvichibvira nhare kumunhu yave akavaka, hamungandiurayi